विश्वका १० महंगा खेलाडीको सूची सार्वजनिक, मेस्सी र रोनाल्डो दुवै १ नम्बरमा परेनन् - टि. एल. एन पोस्ट
Home खेलकुद विश्वका १० महंगा खेलाडीको सूची सार्वजनिक, मेस्सी र रोनाल्डो दुवै १ नम्बरमा...
विश्वका १० महंगा खेलाडीको सूची सार्वजनिक, मेस्सी र रोनाल्डो दुवै १ नम्बरमा परेनन्
‘फोर्ब्स’ले वार्षिकरूपमा सर्वाधिक आम्दानी गर्ने खेलाडीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२० ‘मे १’ देखि सन् २०२१ ‘मे १’ सम्ममा सर्वाधिक रकम कमाउने खेलाडीको सूचीमा ३ फुटबल खेलाडी, २ बास्केटबल खेलाडी, २ अमेरिकन फुटबल खेलाडी रहेका छन् ।
त्यस्तै, यस सूचीमा टेनिसबाट १, फर्मुला-१ बाट १ र युएफसी मिक्स् मार्शलआर्टबाट १ खेलाडी सम्मिलित छन्। शीर्ष १० खेलाडीको सूची यस्तो छ।
१०) केभिन डुरान्ट
केभिन डुरान्ट उर्फ ‘केडी’ लोकप्रिय बास्केटबल खेलाडी हुन्। उनी ‘ब्रुक्लिन नेट्स’का लागि पावर फरवार्डका रूपमा व्यवसायिक बास्केटबल खेल्छन्। उनी गत बर्ष सर्वाधिक आम्दानी गर्ने खेलाडीको १० औं नम्बरमा परेका छन्। उनले गत वर्ष मात्र ७५ मिलियन अमेरिकी डलर आर्जन गरे।
९) टोम ब्रेडी
यस सूचीको ९ औं नम्बरमा अमेरिकी फुटबलको प्रख्यात नाम टोम ब्रेडी परेका छ। ‘ट्याम्पा बे बुकानिर्स’का क्वार्टरब्याक ब्रेडिले गत वर्ष ७६ मिलियन अमेरिकी डलर कमाए।
८) लुइस ह्यामिल्टन
फर्मुला-१ भन्ने बित्तिकै ह्यामिल्टनको नाम शुरूमै आउँछ। ३६ वर्षीय ब्रिटिश ड्राइभर ह्यामिल्टन सन् २०१२ देखि मर्सिडिजसँग आबद्ध छन्। उनले गत वर्ष ८२ मिलियन अमेरिकी डलरको आय आर्जन गरे।
७) रोजर फेडेरर
टेनिस जगतको ‘मोडर्न लेजेण्ड’ हुन् रोजर फेडेरर। २० पटक ग्रान्ड स्ल्याम विजेता फेडेरर यस सूचीमा पुरानो नाम हुन्। इन्जुरीका कारण लामो समय देखि टेनिसबाट बाहिरिएका फेडेरर यस सूचीबाट भने बाहिरिएका छैनन्। उनले गत वर्ष ९० मिलियन अमेरिकी डलर कमाए।
यस सूचीको छैटौं स्थानमा छन् ब्राजिलियन ‘साम्बा ब्वाई’। ‘पीएसजी’का स्टार खेलाडी नेयमार सर्वाधिक आम्दानी गर्ने खेलाडीको नम्बर ६ मा परेका छन्। २९ वर्षीय नेयमारले गत वर्ष ९५ मिलियन अमेरिकी डलर आर्जन गरे।
५) लेब्रोन जेम्स
लेब्रोन रेमोर जेम्स बास्केटबलका ठूला हस्ती हुन्। ‘एनबीए’को इतिहासमै सर्वोत्कृष्ट खेलाडि भनेर चिनिने लेब्रोन ‘लस एन्जलस लेकर्स’सँग आबद्ध छन्। ३६ वर्षीय लेब्रोनले गत वर्ष ९६.५ मिलियन अमेरिकी डलरको आय आर्जन गरे।
४) डाक प्रेसकोट
यस सूचीमा सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडी हुन् डाक प्रेसकोट। २७ वर्षीय डाक ‘डालास काउब्वाइज’का क्वार्टरब्याक हुन्। अमेरिकी फुटबलमा निकै प्रसिद्धि कमाएका डाकले गत वर्ष १०७.५ मिलियन अमेरिकी डलर कमाए। यस सूचीमा १०० मिलियनको रेखा पार गर्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन्।
३) क्रिस्टियानो रोनाल्डो
रोनाल्डोको व्याख्या गरेर साध्य छैन। फुटबलमा विश्वव्यापी रूपमा ख्याति प्राप्त गरेका पोर्चुगलका कप्तान रोनाल्डो इटालियन क्लब ‘युभेन्टस’का लागि खेल्छन्। उनी यस सूचीको नम्बर ३ मा परेका छन्। रोनाल्डोले गत वर्ष १२० मिलियन अमेरिकी डलरको आय आर्जन गरे।
रोनाल्डोको कुरा गर्दा मेस्सीको नाम आँफै जोडिन पुग्छ। यस सूचीमा पनि त्यही भएको छ। ‘बार्सिलोना’ तथा अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सी फुटबलमा अत्याधिक रकम कमाउने व्यक्तित्व बनेका छन् र यस सूचीमा उनी दोस्रो नम्बरमा रहेका छन्। उनले गत वर्षको अन्तरालमा १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गरेका छन्।
१) कोनोर मेकग्रेगोर
विश्वकै सर्वाधिक आम्दानी गर्ने खेलाडीको शीर्ष स्थान कोनोर मेकग्रेगोरले ओगटेका छन्। ३२ वर्षीय आयरल्यान्डका मेकग्रेगोर ‘युएफसी’मा ठूलो नाम हुन्। ‘मिक्स् मार्शलआर्ट’मा उत्कृष्टमध्येका एक मेकग्रेगोरले मेस्सी र रोनाल्डो दुवैलाई पछि पारेर यस सूचीमा १ नम्बर स्थान बनाएका छन्। उनले गत वर्ष मात्र १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आय आर्जन गरे।
Previous articleवर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सका सह-संस्थापकको कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट निधन
Next articleसिलिन्डरमा अक्सिजन भर्ने प्रकृया
पल शाहविरुद्ध थुनछेक बहस जारी, थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने वा तारिख वा धरौटीमा छोडेर मुद्दा चलाउने भन्नेबारे आजै टुंगो लाग्ने